के नाइट्स टम्प्लर अस्तित्वमा थियो? - 1aviagem.com
अघिल्लो पोस्ट: के रीगा मा यात्रा? शहर जुन नयाँ र पुरानो वास्तुकलालाई एकजुट गर्दछ - लाटभिया
अर्को पोस्ट: दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रिकीको साथ अन्तर्वार्ता। र अन्तर्वार्ताको बीचमा एक अप्रत्याशित परिवर्तन भयो
पोष्ट गरिएको5डिसेम्बर 2019 द्वारा रोमोमो लुकाना
र अघिल्लो पोस्ट जारी राख्दै, त्यहाँ अझै रीगाको बारेमा कुरा गर्न केहि धेरै सान्दर्भिक चीजहरू हराइरहेको थियो। त्यस शहरलाई मात्र उसको लागि सूर्य लागेको जस्तो लाग्छ। र अझै तापक्रम एकदम तातो हुँदैन। म भन्छु अप्रिल महिनामा 18 र 26 डिग्री बीच एक राम्रो भावना। सूर्यास्तमा सामन्य वातावरणको साथ।
साँचो पश्चिम अपार्टमेन्ट
ठीक छ, मैले अघिल्लो पोस्टमा केहि ईस्टर अन्डा छाडे। र आजको विषय हो:
के नाइट्स टेंपलर वास्तवमै अवस्थित थियो?
वा तिनीहरू केवल लोकप्रिय पौराणिक कथाको हिस्साको रूपमा ऐतिहासिक किंवदन्तीहरू थिए? वा ती हलिउड स्टुडियोहरूको आविष्कार थिए?
जबकि DC सँग पहिले नै आफ्नै ब्ल्याकहेड रिप छन् ...
यो यही हो जुन हामी तपाईंलाई अहिले यो पोष्टमा लेराउँदछौं।
तिमीलाई सही थाहा छ ?! अघिल्लो पोष्टमा जस्तै, हाम्रो सुरूवात पोष्ट पुरानो शहरको मध्य वर्गमा छ। (यहाँ पढ्नको लागि क्लिक गर्नुहोस्)।
र जब म टुरिस्ट बस पोइन्ट छोड्न कुर्दै थिएँ, म ब्ल्याकहेड्सको घरको अनुहारतिर हेरेँ।
र मैले देखें कि सब भन्दा स्पष्ट मूर्ति धेरै स्वतन्त्रता स्मारक जस्तै देखिन्थ्यो। ती उस्तै होइनन्, तर समान छन्।
र अनुहारमा तपाईले पहिले नै देख्न सक्दछ कि त्यहाँ 1334 को सालको डेटि। छ। यो कमसेकम भन्न पेचीलाग्दो छ। मलाई थाहा छैन यो केवल म हो कि होइन, तर पुरानो दिनमा मानिसहरू वास्तवमै अनुहारहरू बनाउने बारे हेरचाह गर्थे। आजकल यो सबै समान छ, सबै वर्ग र ऐनासँग। राम्रो कुरा आर्ट नौवाले स्थानको कथा सुनाउने यो मानसिकता ल्यायो। र छतमा मूर्तिहरूले ठाउँको प्रतीक बोक्छन्। ठूलो मूर्तिको हतियारको कोट पनि नोट गर्नुहोस्, यो शाब्दिक रूपमा हाम्रो कथाको लागि "कुञ्जी" हुनेछ।
अनि बसमा उनले यस मूर्तिको बारेमा कुरा गर्न थाल्छ। उसको नाम रोल्याण्ड हो र उनी रीगाको राज्यको रक्षा गर्ने प्रमुख टेम्प्लर नाइटबाहेक अरू केही थिएनन्।
मैले बस अडियोमा सुनेको कुरा थाहा पाएँ।
त्यो मात्र होईन, उनका केही जहाजहरू दौगवा नदीमा डुबाएको थियो र उनीहरूको धेरै सम्पत्ति फ्रान्सेली राजाको आदेशमा थियो जसले रोलाण्डलाई ठूलो पैसा तिर्नु परेको थियो।
Roland जहाजहरु डुबाएको ठाउँमा
र आश्चर्य त्यहाँ रोकिदैन। रोलान्डको अतिरिक्त अन्य टेम्पलर नाइटहरू पनि थिए जसले रिगालाई सुरक्षित गर्थे। हो, यी अन्य मूर्तिहरूले हामीलाई विश्वास गर्न नेतृत्व दिन्छ कि तेह्रौं शताब्दीमा यो स्थानमा भेला भएका अन्य नाइट टेम्पलर थिए। सबैसँग के समान थियो? तिनीहरू नाइट्स वा अमेजन थिए, प्रायः अविवाहित, पवित्र भाकलको साथ जो समय-समयमा ब्ल्याकहेड्स (शायद "सानो पार्टी" को लागि) भेला हुन्थे।
रोलैंड रीगा को संस्थापक।
र भोलिपल्टै मैले अर्को वॉकटोर गरें जहाँ उनीहरूले फेरि रोल्याण्डको बारेमा कुरा गरे। कि उहाँ एक नायक र शहर को संरक्षक संत मानिन्थ्यो। यसबाहेक, उनी एक व्यक्तित्व थिए जो सम्राट चार्लेमेन (9th औं शताब्दी) को वंशबाट आएका थिए (जो फ्रान्सेली थिए) र साम्राज्यको यति विस्तार गरे कि यसलाई क्यारोलिianियन साम्राज्य पनि भनिन्थ्यो। त्यसकारण रोलाण्ड रिगा किल्लाको लागि जिम्मेवार थियो। र यो धेरै प्रतिष्ठा थियो। त्यसबेलादेखि रीगा शहर पहिले नै किल्ला र दुई क्रसिंग साचाहरूको प्रतीक थियो। यो माध्यम को माध्यम बाट गर्न को लागी क्षेत्र को वाणिज्य को लागी धेरै महत्वपूर्ण थियो।
यो तेह्रौं शताब्दीमा यो शहरको छाप थियो।
रीगा टिकट। १th औं शताब्दी
सील विकसित हुँदै थियो र अर्थहरू प्राप्त गर्दै थियो। यो कुञ्जीहरूसँगै सुरु भयो, त्यसपछि यस पछिल्लो पृष्ठभूमिमा दुर्ग यो पछिल्लो (11) सम्म आईपुग्यो जुन रोलान्डको मूर्तिको ढालमा उही उपस्थित छ।
यसैले, अन्य नाइट्स टेम्प्लर जसले शहरको रक्षा पनि गर्थे यो सिल प्रयोग गर्ने अधिकार थियो।
तर नाइट टेम्पलर को थिए?
ठीक छ, यस सबै जानकारी दिमागमा र शहरमा एक दिनको साथ मैले यस सम्पूर्ण कहानीलाई गहिरो खोल्ने निर्णय गरे। र पुस्तकालयमा भन्दा राम्रो कहानी अनुसन्धान गर्न राम्रो ठाउँ छैन। त्यसैले मैले त्यहाँ जाने निर्णय गरें।
विशाल ठाउँको बारेमा सोच्नुहोस्! यो मेरो जीवनमा मैले प्रविष्ट गरेको सबैभन्दा ठूलो पुस्तकालय थियो। दुर्भाग्यवश मैले त्यहाँ थोरै समय पाएको थिएँ, किनकि मैले 18 बन्द गरें: 00h (तिनीहरू4फ्लोर भन्दा धेरै छन् र त्यहाँ पहिलो यात्रा गरिरहेकाहरूको लागि यात्रामा लामो ढिलाइ छ, कि त कलाको यस कामको आन्तरिक संग मोहबाट, म भन्छु, यो पुस्तकालय) , यो सेक्टरहरू द्वारा होस्। हो, र अंग्रेजीमा केहि भेट्टाउनुहोस् जुन मैले लाटभियनको सट्टामा बुझ्न सक्थें, जुन स्थानीय भाषा हो।
तर त्यहाँ तपाईं यी कथाहरूको केही पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ।
नाइट्स टेम्प्लर अवस्थित थियो! वा तिनीहरूलाई भन्ने हुन सक्छ: "क्रिष्टको सुन्दर नाइट्स र सुलेमानको मन्दिरको अर्डर।"
यो सम्पूर्ण नाम पवित्रता, गरीबी, भक्ति, र उनीहरूको आज्ञाकारिताको भाकलबाट आउँदछ। तिनीहरू अविनाशी भनिएका थिए त्यसैले यदि तिनीहरूले कसैलाई मार्नु पर्छ भन्ने सोचे भने यो ख्रीष्टको इच्छा थियो। र "सोलोमनको मन्दिर" को अंश। यो अर्डर भएको ठाउँमा मिल्छ। सुलेमानको मन्दिर भएको पर्वतमा। जे होस्, सुलेमान केवल बाइबलीय राजा मात्र होइन, तर राजा डेभिड लगायत सबै राजाहरूमा विद्वान् र धनी पनि भनिएको छ। त्यसोभए, “ख्रीष्टको सुन्दर नाइट र सुलेमानको मन्दिर” हुनुले बुद्धि र समृद्धि पनि ल्याउँछ।
युद्धको समयमा उनीहरू लडाईमा निर्णायक थिए। तिनीहरूले ख्याति र कुख्यातता प्राप्त गरे। सुरुमा तिनीहरू दुबै स्थानीयहरू र राजाहरूका अनुदानहरूमा बस्थे जसले यरूशलेमसम्म जानका लागि उनीहरूको एस्कॉर्ट सेवाहरू प्रयोग गर्थे।
वास्तवमा धेरै जसो मुद्दाहरूमा यो सूचित गर्न पनि प्रयोग गरियो कि त्यो किल्ला वा त्यो सहरका मानिसहरू र उनीहरूका कारवां मालहरू जुन यरूशलेममा जान्छन् अक्षुण्ण आइपुगेको छ।
विशेष रूपमा उनीहरूले सेवाहरू युरोपियन राजाहरू र मंगोल सम्राटहरूलाई भाडामा लिए। बाटोमा धेरै चोर र लुटेराहरू थिए। धेरै राजाहरू आफ्ना धन-दौलत रथहरूमा यात्रा गरिरहेका थिए। निजी गार्डसँग नाइटको जस्तै भूभागको ज्ञान थिएन। तसर्थ, रणनीति र लडाईको ज्ञानका साथ केही नाइटहरूले आफूलाई परिचय दिने निर्णय गरे र टेम्प्लरको यो सम्मानजनक आदेश बनाए।
र तिनीहरूको आदर्श वाक्य थियो, "हे प्रभु, हामीलाई होइन, तपाईंको नामको महिमा।" र उसको पोशाकबाट सेतो पृष्ठभूमिमा प्रसिद्ध माल्टिस क्रस आउँदछ। जुन ब्राजिलमा पहिलो पटक भास्को दा गामा काराभेलमा देखा पर्‍यो। म यहाँ भन्नेछु कि ऊ सायद एक अस्थायी नाइट थियो! वा नयाँ पुर्तगाली अर्डर जुन टेम्प्लरबाट आउँदछ। अघिल्लो नाम प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध थियो।
केवल विवरणहरू हेर्नुहोस्: रेड क्रस (माल्टिस), धर्मयुद्ध मौसम, नेभिगेसन सीपहरू, मानिसहरूलाई एस्कार्ट गर्दै ... राजाको विश्वास ... सबै राम्रा संकेतहरू हुन् हो कि ऊ टेम्प्लर हुन सक्छ।
अझै सन्तुष्ट छैन मैले केही संग्रहालयहरू भ्रमण गर्ने निर्णय गरें। यी मध्ये पहिलो सेन्ट पिटरको क्याथेड्रल थियो। वास्तवमा, मैले सोचें कि म एउटा क्याथेड्रल भ्रमण गर्ने छु, तर त्यहाँ पुग्दा मैले महसुस गरें कि त्यो भवन संग्रहालय बन्यो। र पहिलो कुरा मलाई भनिएको थियो कि ब्ल्याकहेड्सको घर सहित शहरको मध्य वर्गको पूरै अनुहार बहाल थियो। तपाईंले अहिले सम्म देख्नुभएका सबै चीजहरू पहिलो र दोस्रो विश्व युद्धहरूमा नष्ट भइसकेका छन्। तर देश र चन्दालाई महत्त्व दिंदा सेन्ट पिटर क्याथेड्रल र पाउडर टावर बाहेक सबै कुरा पुनःभण्डारण गरियो। यी ती संरचनाहरू हुन् जुन तेह्रौं शताब्दीदेखि ईमान्दार रहिरहेछन्। र त्यहाँ क्याथेड्रलमा तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ मूल मूर्तिहरू बम विष्फोटले च्यातिएका।
ठिकै छ, अझै यो टेम्प्लर कहानी मा, सोच्नुहोस् कि तिनीहरूले राजाहरुलाई पैसा दिन्छन्! र याद गर्नुहोस् कि रोल्याण्डको फ्रेन्च वंश थियो।
रीगाको किल्ला धेरै पैसाले बनाइएको थियो, यसको केही अंश त्यहाँ भेला भएका टेम्प्लरबाट आयो। र संग्रहालय इतिहासकारहरू भन्छन् कि फ्रान्सेली राजा फिलिप चौथोले “सुन्दर” भनेर चिनिने टेम्पलरलाई धेरै पैसा तिर्नु परेको थियो, उनी मात्र होइन पोप क्लेमेन्ट। Debtण यति ठूलो थियो कि यसले फ्रान्सेली साम्राज्यको अखण्डतालाई धम्की दियो। र यो कथा पोपलाई मन परेन कि मानिसहरूले सन्तहरूलाई चर्चमा पवित्र शूरवीहरूले बदले। त्यसपछि एउटा शुक्रबार, अक्टूबर 13, 1307 राजाले आफ्नो राज्यका सबै टेम्प्लरहरूलाई जेलमा राख्ने आदेश दिए। तसर्थ तिनीहरूले शुक्रवार 13 को खराब भाग्य भन्छन्। क्याथोलिक चर्च, जसले विश्वासीहरूको जीवनमा आफ्नो अनुपम र सार्वभौम भूमिका पनि गुमायो। अन्ततः उनले फ्रान्सेली राजालाई समर्थन गरे र पोपको आदेशद्वारा "पवित्र चर्च" ले विधर्मी नाइट्स टम्प्लरलाई विघटन र नामेट पार्ने आदेश दिए। त्यसपछि पोप क्लेमेन्ट र फ्रान्सका राजा फिलिपको तर्फबाट टेम्पलरहरूलाई सताउन थाले। शारीरिक मात्र होइन, मानहानि पनि।
एक उत्कृष्ट उदाहरण ब्ल्याकहेड्समा प्रतीक हो। कालो हेडको घर।
प्राचीन टेम्पलर प्रतीक
त्यहाँ पोपको आरोप छ कि त्यहाँ, ब्ल्याकहेड्समा, नाशको खण्ड थियो जसले समलैose्गिकता प्रचार गर्‍यो, केवल विधर्मीहरूले गरेका कार्यहरू। र प्रमाणको रूपमा यो देख्न चाहने जो कोहीलाई यसको प्रतीकमा छापिएको थियो। टेम्पलरहरूले प्रतीक परिवर्तन गर्‍यो। यसभन्दा पहिले, त्यहाँ घोडामा दुई नाइटहरू राखिएको थियो, यो प्रतीकको रूपमा टेम्पलर नाइट दुई मूल्यको थियो, लडाईमा उसको फुर्तिलो यस्तो थियो। (के तपाई ब्याटमैन र रोबिनलाई चिन्नुहुन्छ? हो, त्यस्तै) तर पोपको आरोप पछि उनीहरूले एउटा नाइट हटाए जुन आज देखिन्छ।
र भविष्यवाणी गर्दै कि उनीहरूले रीगामा आक्रमण गर्न कोशिस गरिरहेका सेनालाई जित्न सक्दैनन्, तिनीहरूले निम्नलिखित शिलालेख फेडेडमा बनाए:
"के म मर्नै पर्छ, त्यसपछि आएर मलाई फेरि निर्माण गर्नुहोस्।" जसको अर्थ हो: यदि म नष्ट भयो भने, फेरि आएर मलाई पुनःनिर्माण गर्नुहोस्।
यो जान्नु अचम्मको कुरा हो कि दर्ता वास्तवमै गरिएको थियो। घर पहिलो पटक 1.333 मा खोलियो। यो दोस्रो विश्व युद्धबाट नष्ट भयो, तर 1999 मा पुन: निर्माण गरियो। र यस कारणका लागि ब्ल्याकहेड्स घरमा दुई उद्घाटन मितिहरू छन्।
उहाँ पनि त्यहाँबाट जानुभयो, स्पष्टतः क्याथोलिक चर्चले पनि सताएको थियो, प्रोटेस्टेन्टहरूका लागि परिचित सुधारवादी। मार्टिन लुथर।
त्यो हो, यदि कथामा विश्वास समावेश छ र यसमा चर्चसँग संघर्ष गर्नु समावेश छ भने यो रीगाको माध्यमबाट जान्छ।
र कालो टाउकोको यो घर भित्र कसरी छ?
खैर, यो एक ठूलो रहस्य हो, जब म त्यहाँ थिए यो एक घटनाको लागि बन्द गरिएको थियो। त्यसैले मलाई बाहिर पठाइयो। तर गार्डहरूले मलाई बाहिर निकाल्नु अघि म केन्द्रीय हलमा चुपचाप हेर्न सक्थें। (तपाई अब शान्त स्थानमा ईतिहासको लागि खोजी गर्न सक्नुहुन्न)।
र यो केवल लबीले बाँकी कल्पना गर्नुहोस्! म मद्दत गर्न सक्दिन तर वेन मन्शनलाई यसको गोप्य सुरुnelहरू र परिच्छेदहरूको साथ सम्झनुहोस्। भ्रमण मार्गनिर्देशकहरू भन्छन कि पुनर्निर्माणको क्रममा धेरै अन्डरपासहरू फेला पर्‍यो जसले ब्ल्याकहेड्सको घरलाई वरपरका घरहरू, चर्च र जहाजको बन्दरगाहमा जोड्ने अनुमति दियो। र तिनीहरू केवल फेला परेका थिए किनकि पुनर्निर्माणमा त्यहाँ घरको जग जम्मा गर्न उत्खननहरू थिए जुन दोस्रो विश्वयुद्धको बममा बम विष्फोटबाट 1941 मा ध्वस्त भयो।
र रोल्याण्डको कथा कसरी अन्त्य भयो?
दुर्भाग्यवश उनी एक शूरवीर थिए जसले पोप वा राजाको पक्षबाट आफ्नो घर छोडेनन।राइगा प्रमुखको रूपमा उनले त्यहाँ बस्न रोजे र अन्ततः उनलाई पक्राउ गरियो, आरोप लगाइयो र अन्तत: मध्य चौकमा मारियो।
आफ्नो अन्तिम शब्दहरुमा नाइट रोलाण्डले भनेः
“फिलिप, क्लेमेन्ट! मैले धोका दिएर कुनै अपराध गरेको छैन। त्यसैले म प्रार्थना गर्दछु कि एक वर्ष भित्र तपाईंहरू दुईजनाले मेरो अगाडि मेरो अ settle्कहरू भगवान्सामु मिलाउनुहुनेछ! उनीहरूले मलाई हानि गरे। ”
र मरे ...
चाखलाग्दो कुरा, उनीहरू भन्छन् कि एक महिना पछि फ्रान्सेली राजाको मृत्यु भयो! र छ महिना पछि पोपको मृत्यु भयो! यो सबै, 1 वर्ष अन्तिम मिति भित्र।
यो मेरो प्यारा पाठकहरु हो, रोलाण्डको प्लेग समातियो।
र यो कथा रिगाको सेन्ट पिटर क्याथेड्रलमा पढ्न सकिन्छ।
के तपाईं भन्नुहुनेछ कि यो परिदृश्य होईन? एक मूर्ख हुनु यी कुराहरू छ।
काम गर्नु भन्दा पहिले म मेरो साथी जेलाई सलाम पठाउन चाहान्छु, किनकि उहाँ मलाई पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जसले फिल्मको ब्रह्माण्ड बाहिर टेम्प्लरको अस्तित्वको बारेमा कुरा गर्नुभयो। वा DC Comics बाट।
र यो रिगामा हाम्रो पहिलो यात्राको परिणाम हो, सुझावहरूको लागि र के भ्रमण गर्ने। अघिल्लो पोष्ट यहाँ पहुँच गर्नुहोस्।
मलाई आशा छ तपाईंले रमाइलो गर्नुभयो, यदि तपाईंलाई रातो बटनमा हामीलाई पछ्याउन मनपर्‍यो भने र साथीहरूसँग यो कथा साझा गर्नुहोस् जसमा कलाले जीवनको नक्कल गर्दछ।
इतिहास नौकर नाइट्स इतिहास रीगा रोल्याण्ड तेह्रौं शताब्दी टेम्पलरहरू